Ụzọ njikwa ọkụ ọkụ Smart LED Linear
site na nchịkwa na 21-08-21
Ụzọ njikwa ọkụ ọkụ Smart LED Linear Site na mmepe nke teknụzụ nwere ọgụgụ isi, anyị nwere ugbu a ụzọ njikwa dị iche iche n'ọhịa ọkụ. Taa, anyị ga -akpọrọ gị ka ị lelee ụzọ njikwa ọgụgụ isi nke ọkụ. Njikwa mmetụ aka nke ọma Maka ndị ọrụ na -ahụkarị tra ...
Otu esi ahọrọ Loght LED
N'ime afọ ole na ole gara aga, itinye ọkụ LED n'ọhịa ọkụ amụbaala, na oriọna LED na -ewebata ndị ọhụrụ, nwere ụdị dị iche iche, wee bụrụ ọmarịcha ala na ndụ anyị. Yabụ, kedu ka esi ahọrọ oriọna LED dabara adaba? N'ezie, onye ọ bụla b ...
aluminom alloy channel duru warara ọkụ
1. Gịnị bụ ọwa aluminom alloy duru warara ọkụ aluminom alloy channel led strip light = ọwa aluminom + eriri LED wuru + ike mbanye mpụga. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ LED, ọwa aluminom alloy na-eduga ọkụ warara bụ ngwaahịa na-arụcha nke arụchara arụcha, nke ...